Sokafy! Italia dia nanetsiketsika an'i Eropa tany Rotterdam nandresy an'i Eurovision
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Sokafy! Italia dia nanetsiketsika an'i Eropa tany Rotterdam nandresy an'i Eurovision
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Enga anie 23, 2021
Miara-dalana ny mozika sy fizahantany ary i Rotterdam no ivon'io omaly alina.
Ny Eurovision 2021 dia fiverenana tonga soa ho an'ny fifaninanana hira manerana ny kaontinanta.
Eurovision no fifaninanana mozika voalohany any Eropa.
Ny hetsika 2021 niaraka tamin'ny mpijery 3000 dia natolotry Rotterdam, Netherlands ny sabotsy alina
I Italia no mandresy, arahin'i Frantsa sy Suisse
Ny Eurovision Song Contest 2021 dia natao tany Rotterdam na teo aza ny COVID-19 sy teo ambanin'ny Slogan "Open Up"
Natao tany Rotterdam aorian'ny fihemoran'ny herintaona, ireo mpijery efa nihena nefa matetika dia faly nahita maso ny talenta iray.
Mazava ho azy fa kitapo mifangaro io. Saingy tsy misy isalasalana fa tsara ny namerina azy io.
Rotterdam no nampiantrano ny hetsika taorian'ny nandresen'i Duncan Laurence, izay tsy afaka nanao fampisehoana mivantana tamin'ity taona ity noho ny fitsapana ny COVID, tamin'ny gala 2019.
Vakio ny isa marina amin'ny pejy manaraka